गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा पिसिआर मेसिन बन्द, संकलित स्वाब परीक्षणमा कठिनाई - News Today
गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा पिसिआर मेसिन बन्द, संकलित स्वाब परीक्षणमा कठिनाई
राजविराज, ०९ मंसिर ।
गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराजमा संचालित पिसिआर मेसिन बन्द हुँदा सर्वसाधारणहरुलाई समस्या भएको छ । जिल्लाको एक मात्र पिसिआर सेवा बन्द हुँदा संकलित स्वाब परीक्षणमा कठिनाई भएको हो ।
अस्पतालले करार कर्मचारी नियुक्त गरि पिसिआर सेवा संचालनमा ल्याएका थिए । उनीहरुको गत कार्तिक २८ गते करार अवधि समाप्त भएपछि जनशक्तिको अभाव देखाउदै अस्पतालले पिसिआर मेसिन बन्द गरेका छन् । जिल्लामा स्वाब परीक्षण गर्ने अर्को ब्यवस्था नहुँदा धरान र विराटनगर पठाउने गरेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रन्जित झाले बताए । करारमा नियुक्त गरिएको कर्मचारीहरुको गत कार्तिक २८ गते नै अवधि समाप्त भयो डा. झाले भने, उनीहरुको विभागले म्याद नथप्दा जनशक्ति अभावले मेसिन नै बन्द गर्ने स्थित आयो । करारमा नियुक्त कर्मचारीहरुलाई सेवाअवधि थपका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्दा समेत सुनुवाई नगरेको उनले वताए ।
अस्पतालमा संचालित मेसिन संचालनमा नआएपनि पिसिआर सेवालाई निरन्तरता दिएको बताए । संकलित स्वाब परीक्षणका लागि धरान, विराटनगर पठाउने गरेको डा. झाले जानकारी दिए । यता अस्पतालको उदासिनताका कारण पिसिआर मेसिन बन्द भएको सेवाग्राहीहरुको आरोप छ । कर्मचारीको सेवा अबधि थप गर्न अस्पतालका मेसु डा. झाले समयमा तदारुकता नदेखाउँदा स्वाब परीक्षणबाट बञ्चित हुनु परेको एक सेवाग्राहीले बताए ।
पिसिआर सेवाका लागि अस्पतालले ६ जना कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए । आस्पतालमा कार्यरत राजेश साह, सुरेन्द्र कुमार यादव, मो. आजज आलम, कृष्णा कुमार मण्डल, डम्बर कुमार मण्डल र कमल किशोर मण्डलको करार अवधि सेवा २८ कार्तिकसम्म रहेका थिए ।
मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. झाले छिट्टै जनशक्तिको व्यवस्था गरि पिसिआर मेसिन संचालनमा ल्याउने बताए । बजेटको अभावले कर्मचारी नियुक्त गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए ।
Previous : विद्यालय छोडेका किशोरीहरुलाई साईकल तथा शैक्षिक सामाग्री वितरण
Next : विप्लव नेतृत्वको नेकपा सप्तरीद्वारा पार्टी पुनस्र्थापनाको अवसरमा बिभिन्न कार्यक्रम आयोजना